Semalt: njani ukukhusela ukulandelwa kwee-intanethi?
Yonke into eyenziwa ngabantu kwi-intanethi ingalandelwa kalula, kwaye iinkampani ze-intanethi ziqokelela inani elikhulu leenkcukacha malunga nabaxhasi babo imihla ngemihla. Basebenzisa le datha ukuthengisa iimveliso ezahlukileyo kwaye bajolise kubaphulaphuli abafanelekileyo. Kwakhona kusetyenziselwa ukuthumela imiyalezo yokuthengisa eyakhethekileyo kunye nejolisiweyo xa ushafa kwiWebhu yeWebhu yehlabathi. Kukhuselekile ukutsho ukuba ukulandelela i-intanethi kuye kwaphakamisa ezininzi iinkxalabo zobumfihlo kwiinyanga ezizayo - buy watches online replica.
Asikwazi ukungena kwiinkcukacha zazo zonke iinkampani, kodwa ziqokelela ulwazi lwethu nsuku zonke. Asikwazi nokuba singasebenzisa njani iinkonzo zabo kunye naluphi uhlobo lweemveliso ezinikelayo.
U-Ivan Konovalov, uchwepheshe ophezulu ovela kwi Semalt , uqinisekisa ukuba ezininzi iinkqubo zokulandelela i-intanethi aziyingozi kwaye zingasetyenziswa ukuchonga ubuqhophololo kunye ne-intanethi kwi-intanethi.
Ulandelelwano lwe-ad ad tracking work
I-cookies kunye nobumfihlo be-intanethi zixhalaba ezimbini kwi-intanethi. Kwizaziso ezibonakala kwiwebhsayithi, umatshini unembopheleleko yokurekhoda izinto ezichanekileyo kubasebenzisi, nqakraza phambili kwaye ugqithise. Kubizwa ngokuba yinkqubo yokulandelela isikhangiso kwaye yenzelwe ukuvavanya ukuphumelela nokusetyenziswa kweentengiso. Kwiinyanga ezinje, le nkqubo iye yazuza impumelelo enkulu, kwaye iimveliso ezininzi ziyakhangwa kuyo.
Ikhukhi yeqela lesithathu ihamba nenxalenye enkulu kwinkqubo yokulandelela isikhangiso. Iifayile ezincinci zigcinwa kwiiphepha zewebhu ezikunceda ukuchonga iiwebhusayithi ozifakela kuyo. Ulwazi lwakho kunye nee-URL zigcinwa imihla ngemihla, kwaye iikhukhi zivela kwimifanekiso eqhotyoshelweyo, iintengiso ze-intanethi kunye neziza ozithandayo ukutyelela.
Kufuneka ukhumbule ukuba ii-cookie zilungile kwaye zimbi. Ngaphandle kwabo, iiwebhusayithi ezahlukeneyo ezifana ne-Facebook, i-Amazon, i-eBay kunye nabanye abayi kufumaneka ngokuchanekileyo. I-cookies igcina ulwazi oluncedo malunga ne-server yakho, ukuncedisa amasayithi ukuphucula iinkonzo zabo kwaye kukunikezela ngokubhekiselele kumntu kunye nokubhetele kunamava ngaphambili.
Kodwa ezinye i-cookies, zenzelwe ukunceda abakhangisi. Zixhomekeke kwingcaciso eqokelelwe ngala makhukhi. Ngokomzekelo, i-Google DoubleClick ibhala iimitha zamatrikhi kunye neeprofayili ukuchonga ukuba ngababhengezeli kunye neentengiso ziya kuhambelana neendawo zakho.
Vimba i-Intanethi ye-Ad Tracking
Ngenxa yobuninzi bewebhu bewebhu, kungenakusebenza ukukhubaza ikhukhi. Ndithembele kum, kudla ixesha kwaye enye yeenkqubo ezininzi ezinomsindo. Ungakwazi ukuvimba iikhukhi zokukhangisa ngokuzikhubaza kwi-browser yakho.
I-Federal Trade Commission kunye nazo zonke iinkampani zikaRhulumente zibeke imigaqo nemimiselo. Bobabini i-Yahoo kunye ne-Google zandula inkqubela ye-Opt Out kunye nolawulo lobumfihlo kwi-akhawunti yabasebenzisi babo.
Ukuze ukhethe olu khetho, kufuneka uhambe kwi-akhawunti yakho ye-Gmail okanye ye-Yahoo uze ukhangele iZiko loBucala be-Google okanye iMenenja ye-Ad Intsha ye-Yahoo. Apha, uya kufumana iqhosha le-Opt Out kunye namanye amaqhosha. Unqakraza eli qhosha kwaye ungenzi nto nanye. Ukuba unokudibanisa, kufuneka uhlolisise iphepha lokunceda kwiiwebhsayithi ezimbini.
Lungisa izicwangciso zeSiphequluli sakho
Iiphequluli ezahlukeneyo zakhele izicwangciso zokunqanda i cookies kunye neebhodnesi ekufakwe kwisistimu yakho. Ukuba awufuni ukukhupha ikhukhi, kufuneka uhlengahlengise izicwangciso zebhrawuza zakho kwaye unqande iinkqubo zokulandelela izibhengezo ekubhaleni nantoni na eyenzayo kwi-intanethi. Kufuneka ususe kwakhona idatha ekhoyo ngokukhawuleza. I-ReputationDefender inikezela abathengi bayo ngeenkonzo ezikhuselekileyo zokukhusela zangasese kwaye ziqinisekisa ukuba akunakwenzeka kwi-webmasters kunye neenkampani ukufumana ulwazi lwakho kwi-intanethi.